”Weliba arjigiinna ma eegin!” – Ururka EAC oo jees jees uga jawaabey codsi ay Somalia u dirtay xilli uu guddoonka la wareegey Kenyatta | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”Weliba arjigiinna ma eegin!” – Ururka EAC oo jees jees uga jawaabey...
”Weliba arjigiinna ma eegin!” – Ururka EAC oo jees jees uga jawaabey codsi ay Somalia u dirtay xilli uu guddoonka la wareegey Kenyatta
(Nairobi) 28 Feb 2021 – DF Somalia ayaa ku khasbanaan doonta inay muddo dheer sugto inay miis la wadaagto dalalka ku jira baloogga loo yaqaan East Africa Community oo uu ka dhexeeyo suuq midaysan.
Kulan-madaxeedkii 21-aad ee dalalka EAC oo shalay qabsoomay ayaa lagu caddeeyey in aan xitaa la eegin arjigii ay Somalia ku codsanaysey inay suuqan kusoo biirto, sida ku cad warbixin kasoo baxday EAC.
Halka Somalia lagu dhegeystey waxaa la qaaday arjiga dalka Jamhuuriyadda Dimoqraadiga ah ee Congo, iyadoo codsigeeda laga jawaabi doono kal-fadhiga kulan-madaxeedka soo aaddan ee 22-aad.
Waxaa sidoo kale la isla ogolaaday in la dedejiyo sidii ururka loosoo gelin lagaa South Sudan taasoo loogu baaqay Guddiga Fulinta EAC.
Diidmadan ayaa kusoo beegmaysa jeer uu madaxtinnimada EAC uu la wareegey Uhuru Kenyatta oo xilka kala wareegaya MW Rwanda ee Paul Kagame oo xilka qabtay Febraayo 2019, iyadoo Xoghayaha Guud sidoo kale laga dhigay Dr. Peter Mutuku Mathuki oo Kenyan oo 5 sano xilkaa haynaya.
Previous articleHalis kusoo socota dalal ay Somalia ku jirto oo laga sii digayo + Sawirro
Next articleSucuudiga ayaa kaddib markii lagu tiray khaarajintii Jamaal Khashuuqji dhibaato ka wajahaya dhinac kale